Top 6 Ndị na-ehi ụra n'ụra na Europe maka Njem | Save A Train
Home > Travel Europe > Top 6 Ndị na-ehi ụra n'ụra na Europe maka Njem
Ò nwetụla mgbe ị na-eche ihe ọ dị ka ya anya, obosara-eyed, nnukwu picture windo dị ka ụwa aja n'ekueku site? Olee banyere ịbụ lulled ụra site na otu ebe Mkpatụ nke a ụgbọ okporo ígwè dị ka ọ trundles ala a track? Train njem bụ usoro a na-ahụkarị maka ụgbọ njem na Europe niile, na ikekwe otu n'ime ndị kasị mma isi mee nke a bụ site na a sleeper ụgbọ okporo. ndị a ụgbọ oloko, nke na-apụ n’ehihie ma na-eme njem abalị, na-enye ahụmịhe dị iche na ọkọlọtọ nnwale njem ụgbọ oloko. Anyị na-na chikọta ndi kacha mma sleeper ụgbọ oloko na Europe n'ihi na ị. Si Italy na France, Lee anyị ụgbọ oloko isii kacha elu nke Europe.
Train Transport bụ The Eco-Enyi na Enyi Way To Travel. Isiokwu a na-e dere na-akụziri banyere Train Travel site Save A Train, Ndị dị ọnụ ala Train Tickets weebụsaịtị Na The World.
Top sleeper Train 1: Milan gaa Palermo
Ọ bụrụ n ’ị rọrọ nrọ ịhụ obodo Italia, a sleeper ụgbọ okporo ígwè bụ otu n'ime ụzọ kacha mma ime otú ahụ. Ọ bụ ezie na ụgbọ okporo ígwè na njem na-ewegharia awa iri abụọ site na mmalite ruo n'isi, ụgbọ okporo ígwè bụ kpọmkwem na e nwere ndị a dịgasị iche iche nke nhọrọ maka sleeper cabins. Tiketi ndị dịnụ via Thello, nke na-arụ ọrụ tiketi na Venice.
Ọ bụrụ na ị na-achọ na-azọpụta ego, can nwere ike ịhọrọ oche ga-anọ mmadụ anọ, nke ọrụ dị ka a ụdị Obere sleeper nhọrọ. Otú ọ dị, ma ọ bụrụ na ị na-achọ iji nweta ụfọdụ oké njọ mechie-anya, can nwere ike ịhọrọ kewaa ndị ụlọ atọ na ndị enyi gị – ma ọ bụ ọbụna na-amabughị, na tiketi ga-eri n'okpuru 50 euro. Nke ahụ bụ a bara nnọọ bargain! Ọ bụrụ na ị na-achọ ka a na ihe Deluxe ọnọdụ, ị nwekwara ike doputa a otu sleeper maka n'okpuru iri asatọ euro. Mgbe ị ga-ahụ ihe ọ bụla en ụlọ ọrụ, you ga enwe ike ịnụ ụtọ ụra n'udo maka ọnụahịa dị ọnụ ala.
Njem a na-ahụ a buru ibu swath nke Italy, dị ka ọ na-ewe gị site na Milan ụzọ niile ka n'ọnụ nke mba buut. N'ụzọ, ị ga-enweta vistas na-ekpochapu nke ụsọ oké osimiri na ugwu Tuscany. Nke a bụ, n'ezie, na mgbakwunye na akpụrụ akpụ nke Rome na akụkọ ya.
Top sleeper Train 2: Zurich Na Hamburg
Nke abụọ anyị ghota maka kacha mma sleeper ụgbọ okporo ígwè na Europe bụ onye na-agba ọsọ site na Zurich, Switzerland na Hamburg, Germany. Ọ bụrụ na ị na-achọ ụra ụgbọ oloko ọrụ, ị ga-chọrọ tụlee Nightjet. Ezie na e nwere ọtụtụ n'akwụsịghị akwụsị nhọrọ maka nke a ụgbọ okporo ígwè, nwere ike ị chọrọ tụlee aga via a ụzọ na-enye gị na-agbanwe. Obodo mara mma, na ụgbọ oloko pụtara ọtụtụ obere obodo n'ụzọ, tinyere obodo Hanover. Obodo ndia na-ọma uru a na-akwụsị na gị na njem ma ọ bụrụ na ị nwere oge. Echefula ihe ahụ ikpọ echiche nke Alps ị ga-enwe ike ịnweta ma.
ọbụna ka mma, ozugbo ị na-mere ụzọ gị Hamburg na ị na-a obere anya si Berlin. Isi obodo German nke ugbu a bụ maka ama n'ụlọ ịgba ọkpọ ya na ịrara onwe ya nye ọdịbendị hipster. Nwee obi ụtọ n'okporo ámá na nnukwu kọfị ka ị na-atụgharị uche fọdụụrụ nke mgbidi Berlin.
Top sleeper Train 3: Brussels Iji Vienna
The Brussels na Vienna European sleeper ụgbọ okporo ígwè bụ a na-ewu ewu ụzọ ejikọta Belgium na Austria. Dabere n'ụgbọ oloko ị họọrọ, Ọ na-agba ọsọ dịtụ site n’ehihie wee rute n'isi ụtụtụ, ọ bu kwa abali iri na anọ’ njem oge. Nke a bụ nnọọ mfe afo karịa, asị, iri abụọ na abụọ nke ụgbọ oloko chọrọ site na Milan ruo Palermo.
Dị otú ahụ na a obere ego nke oge maka tren njem, ị ga-adịghị mkpa na-ekpetekwa overlong na ụgbọ ala erimeri, n'agbanyeghị na ị ga-enwerịrị ike ịnụ ụtọ ihe eji enyere klaasị dị iche iche aka.
Ozugbo ịnọ Vienna nweta ezi agwa kọfị, dịka Vienna emeela nke ọma ka ọ bụrụ etiti kọfị European.
Brussels na Bruges tiketi
Antwerp na tiketi Bruges
Brussels na tiketi Vienna
Gredit na tiketi maka Bruges
Top sleeper Train 4: London Na Edinburgh
Nke a ma ama nsochi usoro na-agba ugboro isii kwa izu. Na-akpọkwa Caledonia sleeper, ọrụ ụra a na-agwakọta okomoko na-eri-arụmọrụ. Ị nwere ike ịchọta amụọ na gụnyere nri, ọṅụṅụ, na N'ezie, ụlọ ịrahụ ụra.
Ọ bụrụ na ị na-achọ ịga leta London n'oge gị njem, ị nwere ike mgbe niile na-ahọrọ na-Eurostar si Chile Europe. Nke a bụ a na-eri-irè na ụzọ dị mfe iji mee ka njem gafee ọwa si France na England. Tiketi ndị dịnụ si ebe ọzọ, dịka Amsterdam.
Ọ bụrụ na ị na-achọ a mere na-eburu nke a ụzọ, cheta na Edinburgh bu n'ụlọ Harry Potter, na famed e kere eke nke JK Rowling. Also nwekwara ike ịchọta njem ọzọ na ugwu, dị ka Fort William, maka na authentic Scottish ahụmahụ. Ọ na-arụ ọrụ maka anyị!
kwesịrị nsọpụrụ aha 5: Paris To Munich
Ọ bụ ezie na njem a abụghị nke dabara eme dị ka ụzọ ụgbọ olora na-ehi ụra, n'ihi na ọ dịghị agụnye a full-ehi ụra ebe ndina, Ọ na-agba ọtụtụ ụzọ kwa ụbọchị.
N'ezie, Paris bụ obodo nke ìhè na otu n'ime ndị kasị ihunanya obodo na ụwa, n'ihi ya, ọ ga-nnọọ akara a ntụpọ na gị European ezumike. Nke a bụ eziokwu ma ọ bụ gị na nleta mbụ ma ọ bụ gị narị.
Ka ọ dịgodị, Munich bụ n'ụlọ ka Oktoberfest. Nke a ememme eme ka otu n'ime m ọkacha mmasị niile oge – ọ bụ a eri ihe omume nke ọtụtụ puku. Na ọtụtụ puku ndị bịara kwa afọ na a plethora nke na-eme site na nke na-ahọrọ, Munich bara uru ọfụma na ndepụta gị.
kwesịrị nsọpụrụ aha 6: Copenhagen Nye Berlin
Nke a bụ ihe ọzọ na kwesịrị nsọpụrụ aha ruru ka a nonstandard sleeper ụgbọ okporo ígwè na ahụmahụ, mana ọ bara uru oge naanị n'ihi na ị ga-ahụ onwe gị ka ị na-agafe ebe ụfọdụ mara mma na Europe. Denmark bụ a pụrụ iche mix nke Scandinavian mmetụta na Chile European na omenala na-adịghị ga-Agbaghara. Rozọ ụgbọ oloko na-amalite oke nso Malmo, nke bụ obodo mara mma ị ga-eleta na nke atọ kachasị na Sweden.
Mgbe ị gaghị ahụ zuru ehi ụra berths a ụgbọ okporo ígwè, ga ahụ ụzọ njem abalị dị kwa ụbọchị. Ndị a ga-ekwe ka ị na-ahapụ n'abalị na-abata ụtụtụ nwee ume n'ihi na ụbọchị na-abịa. N'ihi na nke kacha mma na ahụmahụ na a na-abụghị sleeper ụgbọ okporo, ị ga-achọ idobe tiketi nke mbụ. Ndị a tiketi na-abịa na ụba elele dị ka mmezi ibu, gụnyere nri, na ahụmịhe ụlọ ndị ọzọ.
Tiketi Copenhagen na Berlin
Mgbe ị na-eme njem na njem Bygbọ okporo ígwè Europe i ghapula onwe gi n'ihọrọ. Ma ọ bụ na Scotland ma ọ bụ Spain, Norway, ma ọ bụ Sweden, sleeper ụgbọ oloko na-ụfọdụ ndị kasị mma ọrụ gburugburu abịa n'ututu nwee ume na njikere maka ụbọchị gị na-abịa. Mgbe i nwere a plethora nke nhọrọ dị ka ị na-, dị ka ụlọ ọdụ ụgbọ oloko ma ọ bụ ndị na-ehi ụra abalị na-anya Prague, Poland, Lisbon, ma ọ bụ ọbụna Moscow, ime onwe gị a amara na iti ndị a na isii n'elu sleeper ụgbọ oloko na Europe kama. Ị ga-abụ ndo!
Njem n’abali na were akwụkwọ ụgbọ ala ihi ụra gị jiri Save A Train!
Ị chọrọ Embed anyị blog post “Top 6 Ndị na-ehi ụra n'ụra na Europe maka Njem” na na gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https://www.saveatrain.com/blog/sleeper-trains-europe/?lang=ig የሰማይ አካላት- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
Na ndị na-esonụ njikọ, ị ga-ahụ anyị kasị ewu ewu ụgbọ okporo ụzọ gasị – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml, <- a njikọ bụ maka English ụzọ gasị ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/es_routes_sitemap.xml, ma inwere ike dochie bekee ma ọ bụ de ọtụtụ asụsụ ịhọrọ.
#n'abalị Njem Europe NightTrains Ura ụra Train Travel